Hubachiisa Koree Simannaa fi Deggarsa ABO Irraa Kenname-ABO fi Mootummaa Itoophiyaa jidduutti araarri taasifamaa jira. – Kichuu
HomePhoto GalleryHubachiisa Koree Simannaa fi Deggarsa ABO Irraa Kenname-ABO fi Mootummaa Itoophiyaa jidduutti araarri taasifamaa jira.
(SBO/VOL – HAGAYYA 25,2018)ABO fi Mootummaa Itoophiyaa jidduutti araarri taasifamaa jira. Araarri kunis bifa milkii qabeessaan deemaa waan jiruuf hooggansa dhaabichaa haala ho’aan simachuuf jecha sadarka Oromiyaatti simannaa kana kan qindeessu ‘Koree Simannaa Biyyooleessaa Hoggana ABO’ maqaa jedhuun magaalaa guddoo Oromiyaa Finfinnee keessatti hundeeffamee jira.
Account Number 1000055028088
Jaal Bulchaa, qabsoo Oromoof jettanii bosonaa fi daggala mana godhattan; jiruu dhuunfaa dhiiftanii dantaa sabaaf of kennitan. Hedduu ulfaadhaa!! Bilisummaa dharraatan ija keessaniin argaa!
Jaal Bulchaan umurii isaanii keessaa gara waggaa 60 qabsoo diddaa fi mormii irratti dabarsan. Oromiyaa gama kibbaa Gujjiitti kan dhalatan Jaal Bulchaan, bara HAILESILAASSE finciila diddaa gabaraa kan jedhuun qabsoo eegale. Waggaa 57 dura hanga bara 2011 Dirree qabsoo keessa ture. San booda basaasituun qabsiisitee Maikelawii, Qalittii fi Qilinxootti daraarama ture. akka carraa jaali bulchaa waliin mana hidhaa Maikelawii fi qaalititti waliin ture.
Qabsaa’aa naamusaa beeku; kan taliiga qabsoo waliin jiraatee beeku!!
(SBO/VOL – FULBAANA 02,2018) Miseensi Shanee Gumii Gumii Sabaa ABO fi itti aanaan Jila ABO rakkoo siyaasaa Mootummaa Itiyoophiyaa Fi ABO jidduu Jiru karaa nagahaa fixuuf Finfinneetti Argamee J/Ibsaa Nagawoo fi Gaazexeessitoonni ONN(Oromo media network)TV Gaaddis Dhugaa fi SBO Gootoota Ilmaan Oromooo Hojii Gurguddaa ummata isaaniif Hojjetan Daawwatan.
Imala Fulbaana 01,2018 taasifame Kanaan qabsaawoota mirga Oromoof qabsaawaa turanii miidhaan adda addaa irra gahaa ture fi qabsoo Oromoo keessatti fakkeenya guddaa ta’an daawwatamaniiru.
Calaqaba gooticha Oromoo Waraana TPLF/ERDFn guyyaa saafaa magaalaa Finfinnee keessatti dhukaasini jumlaa itti banamee hiriyoonnii isaa biraa wareegamanii inni madaahee hafee boodas mana hidhaa dukkanaa fi iddoo adda addaatti daramaa turee miidhaa irra gahe kanaanis yeroo ammaa kana miila isaa 2n dhabe mana Kaffaaloo Tafarraatti argamuun kan daawwannaan gaggeeffame yoo ta’u; itti aansuun qabsoo Oromoo keessatti humrii isaa guutuu ogummaa fi humna qabuun kan gumaata olaanaa taasisaa ture magaalaa Adaamaa dhaquun Nuhoo Gobanaa daawwatameera.
J/Ibsaa Nagawoo Sabbata mana Kaffaaloo Tafarraa fi Adaamaa mana Nuhoo Goobanaatti yeroo argamanitti “Isin gootota qabsaawoota hedduuf fakkeenya taatanii dha” jedhaniiru. Addatti Kaffaaloo Tafarraa argisiiftuu miidhaa sirni TPLF/EPRDF ummata Oromoo irraan gahee ti” jechuun dubbataniiru. Ummanni Oromoos ta’e ABOn isin bira” jechuun jajjabeessaniiru.
Ilmaan Oromoo mirga Oromoof qabsaawaa turan kunis Miseensi Shanee Gumii Gumii Sabaa ABO J/Ibsaa Nagawoo fi Gaazexeessonni SBO, Tv.Gaaddisa Dhugaa fi ONN mana isaaniitti argamuun isaan daawwachuu fi jajjabeessuun kan baay’ee isaan gammachiise ta’uu ibsanii, ummata Oromoo yeroo rakkinaa isaan bira dhaabbachaa ture mara galateeffataniiru
Obbo Juneeydii Saadoo biyyatti deebi’an. Ummati hedduun alaabaa ABO kan mallattoo Bilisummaa Oromoo ta’ee jiru qabachuun buufata Xiyyaaraa